Abalingisi Nabahlinzeki Bemboni Yokukala Nokuhlaziya | I-China Measurement and Analysis Industry Factory
Induku ye-Spectral pure graphite electrode
I-Spectral pure graphite electrode inokuqukethwe okuphezulu kwekhabhoni, ukumelana nokushisa okuphezulu, ukuqhuba okuhle ngokushisa okuphezulu. Sinezincazelo namasayizi ahlukene, angenza ukukhiqizwa okwenziwe ngezifiso ngokuya ngezidingo zakho.
I-graphite disk electrode ye-spectrometer kawoyela
Gqoka izinsimbi nezinto ezingcolisayo ku-oyela kunganyamalala futhi kujabuliswe ukukhishwa kwe-arc elawulwayo okwenziwa ubuchwepheshe be-disc obujikelezayo. Imigqa ye-spectral ekhethiwe neyinkomba iyaqoqwa futhi igcinwe kumashubhu we-photomultiplier, ishaja amadivayisi ahlanganisiwe noma eminye imitshina efanelekile.
I-graphite crucible ye-oxygen, i-nitrogen ne-hydrogen amathuluzi wokuhlaziya Isicelo: I-oksijeni nitrogen hydrogen analyzer